Sahara Andrefana: Fahitalavitra Sahrawi Vaovao Mandeha amin’ny Zanabolana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Aogositra 2017 20:50 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, македонски, Português, Italiano, 繁體中文, 简体中文, Español, Ελληνικά, English
(Marihina fa tamin'ny 5 Jolay 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Ity no andrana voalohany itaterana ny tontolon'ny bilaogy Sahrawi. Hiezaka hitondra fanazavana bebe kokoa momba izay lazain'ny bilaogera Sahrawi isan-kerinandro, amin'ny teny Arabo, Anglisy ary Espaniola ny tenako miaraka amin'i Jillian York sy Renata Avila. Iray amin'ireo tantara tena sarotra ny lohahevitra momba an'i Sahara Andrefana ary matetika lasa aloha ny fihetseham-po isaky ny misy ny fifanakalozan-kevitra momba izany. Hanandrana ny fitantarana araka ny fijery Sahrawi araka izay azo atao ho fanajana ny mahaolombelona izahay ary hiezaka ny tsy hitongilana.
Ny fifantenana tamin'ity herinandro ity dia avy amin'ny Western Sahara blog (Sahara Andrefana), lahatsoratra momba ny Fahitalavitra Sahrawi vaovao mandeha amin'ny zanabolana, R.A.S.D. TV (Repoblika Arabo Sahrawi Demaokratika Televiziona):
Tsy maintsy milaza aminareo ny fiandrasako fatratra, toy ireo olon-kafa maro ao amin'ny faritra voabodo, ity zaza vao teraka hahita hazavana ity aho. Ary manana ny televiziona mandeha zanabolana antsika manokana isika izao rehefa niandry hatry ny ela.
Milaza ilay bilaogera fa tokony hampandroso ny raharaha Sahrawi eo amin'ireo firenena Arabo hafa ny asa lehibe indrindra ny fahitalavitra:
Ny hanasongadina ny firenentsika ho an'ireo rahalahy Arabo no anjara asa manan-danja indrindra [ho an'ny fantsona]. Satria mijanona mangina momba ilay olana ny Ligy Arabo , manantena isika fa ho afaka handrava ity sakan'ny fahanginana ity ny fahitalavitra sy mba ho sehatra iray isian'ny adihevitra mandaitra sy fifanakalozan-kevitra iombonana miaraka amin'ireo rahalahintsika Arabo, izay fanamby goavana indrindra atrehan'ny fantsona izany, satria hita fa nandà ny hampiantrano ity fantsom-pahitalavitra ity ireo tompon'andraikitra ao amin'ny Fahitalavitra Arabo Mandeha Zanabolana.
Ary farany, manantena isika fa hampiseho ihany koa ny zava-misy marina momba ny faritra bodoina ny fantsona amin'ny alàlan'ny fandefasana lahatsary izay mampiseho an'i Sahara avy ao anatiny, ary hanao fanadihadiana mikasika ity faritra sy ity vanim-potoana manan-danja eo amin'ny tantaran'ny firenentsika ity.
Syria 1 andro izay